ဆေးဘဲဥ ကြိုက်သူများ အတွက် မဖြစ်မနေ ဖတ်သွားသင့်သော ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ဝိသမလောဘသားတွေ – Shwe Myanmar
Posted on January 27, 2021 January 27, 2021 by Shwe Myanmar
ဆေးဘဲဥ ကြိုက်သူများ အတွက် မဖြစ်မနေ ဖတ်သွားသင့်သော ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ဝိသမလောဘသားတွေ
ယနေ့ စားသုံးသူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက် များလားပြီး ဝယ်လိုအားတိုးလာသောကြောင့် ထုတ်လုပ်သူတို့ က လအနည်းငယ်ကြာ ပြုလုပ်ရသော ဆေးဘဲဥဖြစ်စဉ်ကို ရက်ပိုင်းနှင့်ပြုလုပ်နိုင်ရန် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေ့ လာကြပါတယ်။ calcium hydroxide နှင့် sodium carbonate ပျော်ရည်တွင် ဘဲဥကိုစိမ်ခြင်းက ဆယ်ရက်အတွင်း ပုံမှန်ရိုးရာနည်း ဖြင့်ပြုလုပ်သော
လအနည်းငယ်ကြာ ဆေးဘဲဥကို ပုံမှန်အရသာမ ပျက် ရရှိစေ တာမို့ အချိန်ကုန်ခံထုတ်လုပ်မှုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုးကျိူး အနေနဲ့ကတော့ lead (ခဲ) ဓာတ်ပါဝင်မှုတွေ တိုးလာ တာပါဘဲ။ ဘဲဥထဲသို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် hydroxide and sodium ကို ဝင်ရောက်စေခြင်းက ခဲဓာတ်ကို တိုးပွားလာစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခဲဓာတ်များ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်ရောက်တာများလျှင်
အသက်ဆုံးရှုံးသည်ထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Lead poisoning ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိူး တွေကတော့ အော့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်း၊ ဝမ်းလျောခြင်း၊ ဝမ်းချူပ်ခြင်း၊ သုတ်ကောင်များ နည်းသွားခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှု နည်းခြင်း၊ ဦးနှောက်မြေး ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သွားပိုးစားခြင်း၊ သွေးပေါင်တက်ခြင်း မှသည် အသက်သေဆုံး သည်ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခဲဆိပ်သင့် နေသလားဆိုတာကိုသိချင်ရင်တော့ သွေးဖောက်စစ်ဆေးရင်သိနိုင်ပါတယ်။ သွေးထဲမှာ ခဲဓာတ် ပါဝင်မှု ၁၀ မိုက်ခရိုဂရမ် ပါ ဒက်ဆီလီတာ ထက်ကျော်နေဘီဆိုရင်တော့ ခဲဓာတ် အဆိပ် မသင့်သေးသည့်တိုင်အောင်။ ခဲဓာတ်များနေပြီ လို့ သတ်မှတ် ပါတယ်။ ဗဟုသုတ အနေနဲ့ မျှဝေချင်တာလေးကတော့ ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းဟာ အစားအသောက်တခုတည်း ကနေ သင့်နိုင်တာမဟုတ် ပါဘူး။
ခဲနဲ့ ထိတွေ့သော သူများအားလုံး ရနိုင်တာဖြစ်ပြီး ၊ ခုရေးသားသော အကြောင်းအရာလေးကတော့ လူ အများစု သတိမထား နိုင်သော အကြောင်းအရာလေးတခုကိုသာ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်သုတ်ဆေး ကိုင်သူ၊ ဘထ္ထရီ အိုးပြင်သူ၊ ခဲဂဟေတို့သူ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည် ကာကွယ်သော ခဲအင်္ကျီဝတ်သူ မာကျူရီနှင့် ခဲဓာတ်ပါ သော ဓာတ်ခဲထုတ်လုပ်သော နေရာတွင် အလုပ် လုပ်သူ၊ ခဲ
ကျည်ဆန်ကိုင်သူစသော ခဲနှင် ထိတွေ့သူတွေ မှာ ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘဲဥ (century egg) ကို စားသင့် သလား ??? ဆေးဘဲဥကို century egg, preserved egg, hundred year egg, thousand year egg, millennium egg ,ထုံးဘဲဥ , ဖီတန် ( တကယ်တော့ တရုပ်လို နာမည်ပါ pidan ) လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ ဟိုတလောက မက်ဂီး
လို့ ခေါ်တဲ့လူကြိုက်များတဲ့ခေါက်ဆွဲခြောက်တွေထဲမှာ ခဲဓာတ်တွေ (lead) ပါတာများတာကို အိန္ဒိယမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ လို့ မက်ဂီး ခေါက် ဆွဲတင်သွင်းထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းပြစ်လိုက်ပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆေးဘဲဥကို သတိရမိလို့ ဆေးဘဲဥအကြောင်း မျှဝေတာပါ။ ဆေးဘဲဥကို တရုတ်နိုင်ငံက နေပြီး စတင်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီး ရိုးရာ အားဖြင့် ဘဲဥ ၊
ကြက်ဥ နဲ့ ငုံးဥတွေကို အသုံးပြုကြ ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ရွံ့မြေ ၊ ဆား၊ ထုံး၊ ထမင်း ပျော့ စတာတွေကို လိုအပ်သလိုထည့်ပြီး အသုံးပြုကြပါ တယ်။ ဖြစ်စဉ်အားဖြင့် ဘဲဥအကာ ဟာ စိမ်းပုတ်ရောင်မှသည် မီးခိုးရောင်၊ မီးခိုးရောင်မှသည် အညိုနက်ရောင်သို့ပြောင်းလဲ သွားပြီး ပြစ်ခဲမှု
မှာလည်း အရည် အဖြစ်မှ ဂျယ်လီအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အနံ့ မှာလည်း ကန့် sulphur နှင့် အမိုးနီးယား (ကျင်ငယ်ရေနံ့ ) ဘက်သို့ ပြောင်းလဲ သွားပါတယ်။ PH level သည်လည်း ၉ -၁၀ ကြားပြောင်းလဲပြီး ပြင်းအားများသော အယ်လ်ကာလိုင်း ဖြစ်သွားပါတယ်။
အသိပညာ ဗဟုသုတများခြင်းသည် မင်္ဂလာတပါး(သန့်ဇင်ရှိန်)
ယနေ့ စားသုံးသူတို့ရဲ့ လိုအပျခကျြ မြားလားပွီး ဝယျလိုအားတိုးလာသောကွောငျ့ ထုတျလုပျသူတို့ က လအနညျးငယျကွာ ပွုလုပျရသော ဆေးဘဲဥဖွဈစဉျကို ရကျပိုငျးနှငျ့ပွုလုပျနိုငျရနျ နညျးလမျးမြား ရှာဖှေ့ လာကွပါတယျ။ calcium hydroxide နှငျ့ sodium carbonate ပြျောရညျတှငျ ဘဲဥကိုစိမျခွငျးက ဆယျရကျအတှငျး ပုံမှနျရိုးရာနညျး ဖွငျ့ပွုလုပျသော
လအနညျးငယျကွာ ဆေးဘဲဥကို ပုံမှနျအရသာမ ပကျြ ရရှိစေ တာမို့ အခြိနျကုနျခံထုတျလုပျမှုကို ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဆိုးကြိူး အနနေဲ့ကတော့ lead (ခဲ) ဓာတျပါဝငျမှုတှေ တိုးလာ တာပါဘဲ။ ဘဲဥထဲသို့ မွနျမွနျဆနျဆနျ hydroxide and sodium ကို ဝငျရောကျစခွေငျးက ခဲဓာတျကို တိုးပှားလာစတော ဖွဈပါတယျ။ ခဲဓာတျမြား
ခန်ဓာကိုယျထဲ ဝငျရောကျတာမြားလြှငျ အသကျဆုံးရှုံးသညျထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ Lead poisoning ခဲဆိပျသငျ့ခွငျးရဲ့ ဆိုးကြိူး တှကေတော့ အော့အနျခွငျး၊ ဗိုကျနာခွငျး၊ မောပနျးခွငျး၊ ကွှကျသားမြား နာကငျြခွငျး၊ ဝမျးလြောခွငျး၊ ဝမျးခြူပျခွငျး၊ သုတျကောငျမြား နညျးသှားခွငျး၊ အာရုံစူးစိုကျမှု နညျးခွငျး၊ ဦးနှောကျမွေး ရောငျရမျးခွငျး၊ သှားပိုးစားခွငျး၊
သှေးပေါငျတကျခွငျး မှသညျ အသကျသဆေုံး သညျထိဖွဈနိုငျပါတယျ။ ခဲဆိပျသငျ့ နသေလားဆိုတာကိုသိခငျြရငျတော့ သှေးဖောကျစဈဆေးရငျသိနိုငျပါတယျ။ သှေးထဲမှာ ခဲဓာတျ ပါဝငျမှု ၁၀ မိုကျခရိုဂရမျ ပါ ဒကျဆီလီတာ ထကျကြျောနဘေီဆိုရငျတော့ ခဲဓာတျ အဆိပျ မသငျ့သေးသညျ့တိုငျအောငျ။ ခဲဓာတျမြားနပွေီ လို့ သတျမှတျ ပါတယျ။
ဗဟုသုတ အနနေဲ့ မြှဝခေငျြတာလေးကတော့ ခဲဆိပျသငျ့ခွငျးဟာ အစားအသောကျတခုတညျး ကနေ သငျ့နိုငျတာမဟုတျ ပါဘူး။ ခဲနဲ့ ထိတှသေ့ော သူမြားအားလုံး ရနိုငျတာဖွဈပွီး ၊ ခုရေးသားသော အကွောငျးအရာလေးကတော့ လူ အမြားစု သတိမထား နိုငျသော အကွောငျးအရာလေးတခုကိုသာ ဖျောပွခွငျးဖွဈပါတယျ။ အိမျသုတျဆေး ကိုငျသူ၊ ဘထ်ထရီ အိုးပွငျသူ၊
ခဲဂဟတေို့သူ၊ ဓာတျရောငျခွညျ ကာကှယျသော ခဲအကငြ်္ီဝတျသူ မာကြူရီနှငျ့ ခဲဓာတျပါ သော ဓာတျခဲထုတျလုပျသော နရောတှငျ အလုပျ လုပျသူ၊ ခဲ ကညျြဆနျကိုငျသူစသော ခဲနှငျ ထိတှသေူ့တှေ မှာ ခဲဆိပျသငျ့ခွငျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဆေးဘဲဥ (century egg) ကို စားသငျ့ သလား ??? ဆေးဘဲဥကို century egg, preserved egg, hundred year egg, thousand year egg, millennium egg ,
ထုံးဘဲဥ , ဖီတနျ ( တကယျတော့ တရုပျလို နာမညျပါ pidan ) လို့လညျးချေါကွပါတယျ။ ဟိုတလောက မကျဂီး လို့ ချေါတဲ့လူကွိုကျမြားတဲ့ခေါကျဆှဲခွောကျတှထေဲမှာ ခဲဓာတျတှေ (lead) ပါတာမြားတာကို အိန်ဒိယမှာ ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ လို့ မကျဂီး ခေါကျ ဆှဲတငျသှငျးထုတျလုပျမှုကို ရပျဆိုငျးပွဈလိုကျပါတယျ။ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျ ဆေးဘဲဥကို သတိရမိလို့ ဆေးဘဲဥအကွောငျး မြှဝတောပါ။
ဆေးဘဲဥကို တရုတျနိုငျငံက နပွေီး စတငျပျေါပေါကျလာတာဖွဈပွီး ရိုးရာ အားဖွငျ့ ဘဲဥ ၊ကွကျဥ နဲ့ ငုံးဥတှကေို အသုံးပွုကွ ပါတယျ။ ပါဝငျတဲ့ပစ်စညျးတှကေတော့ ရှံ့မွေ ၊ ဆား၊ ထုံး၊ ထမငျး ပြော့ စတာတှကေို လိုအပျသလိုထညျ့ပွီး အသုံးပွုကွပါ တယျ။ ဖွဈစဉျအားဖွငျ့ ဘဲဥအကာ ဟာ စိမျးပုတျရောငျမှသညျ မီးခိုးရောငျ၊
မီးခိုးရောငျမှသညျ အညိုနကျရောငျသို့ပွောငျးလဲ သှားပွီး ပွဈခဲမှု မှာလညျး အရညျ အဖွဈမှ ဂယျြလီအဖွဈသို့ ပွောငျးလဲသှားပါတယျ။ အနံ့ မှာလညျး ကနျ့ sulphur နှငျ့ အမိုးနီးယား (ကငျြငယျရနေံ့ ) ဘကျသို့ ပွောငျးလဲ သှားပါတယျ။ PH level သညျလညျး ၉ -၁၀ ကွားပွောငျးလဲပွီး ပွငျးအားမြားသော အယျလျကာလိုငျး ဖွဈသှားပါတယျ။
အသိပညာ ဗဟုသုတမြားခွငျးသညျ မင်ျဂလာတပါး(သနျ့ဇငျရှိနျ)
Previous PostPrevious လူ့ဘဝက အကြွေး ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ ကောင်းလဲဆို နွားဘဝ နဲ့ မဖြစ်မနေလာဆပ် ရတဲ့ မအေးဘုံ၏ ဖြစ် ရပ် မှန်
Next PostNext သွားကိုက်ခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်းများ